I-4 I-Courses Training & Certification ye-Microsoft Incredible - Ukuqeqeshwa kwe-ITS
11 uJan 2017
I-1. Ukuthuthukiswa kwe-Microsoft Excel 2013
I-2. Imisebenzi ye-Microsoft Active Directory nge-Windows server 2012R2
I-3. Isingeniso ku-Microsoft Office 365
I-Office 365 ye-IT Pros
Kusukela nge-Office 365
Ukudlulisela i-Office 365
I-Office 365 Service Communications
Ukuphathwa Kwezinguquko ze-Office 365
I-4. Ukwethulwa nokuhlela i-Microsoft SCOM 2012
Lezi zifundo ezithuthukisiwe ze-Microsoft Excel 2013 zihloswe ukuze zithole izinkinga ezibalulekile zokusebenzisa amatafula ajikelezayo, ubuyekeze futhi zihlakaze ulwazi lwephepha lokusebenzela, sebenzisa amadivaysi elwazi, iqembu nabanye, futhi wenze futhi uphathe ama-macros.
Leli cwaningo lihlelwe ngabasebenzi abaphakathi kwamakhono emgwaqo nge-Microsoft Excel 2013 abadinga ukungena emikhankasweni engaphezu kwezinto ezithuthukisiwe noma abaqeqeshi abadinga ukuthatha izindikimba ezihlanganisiwe kule nkambo kwi-interface ye-2013.
Ngokulandela ukuqedela le nkambo, izinkinga zizokwazi uku:
Yenza amatafula wokuguqula nemidwebo.
Landela amaphuzu okubhekisela kanye namawadi.
Shintsha okuqukethwe futhi uvumele futhi uqinise ulwazi.
Hlanganisa nabanye ngokuthola ama-worksheets nama-manual wokusebenzisa.
Yenza, usebenzise, ​​ushintshe, futhi uhlole ama-macros.
Ngenisa futhi uhambise ulwazi.
Thola izandla kusiqondiso futhi usebenze ekulawuleni ukuthuthukiswa kwe-Active Directory ku-Windows Server 2012 naku-Windows Server 2012 R2 kulolu suku lwe-Microsoft olusemthethweni lwe-5. Uzothola ukufaneleka okufanele uqondise kangcono futhi uqinisekise ukuthi ulwazi lunikela futhi ludatha, luhlehlise inhlangano nokuphatha ingqalasizinda yakho yomlingiswa, futhi unikeze ukufinyelela okuphephile kolwazi. Uzofunda ukuthi uhlela kanjani ingxenye yezingxenye eziyinhloko ku-Active Directory, isibonelo, i-Active Directory Domain Services (AD DS), Inqubomgomo Yeqembu, i-Dynamic Access Control (DAC), i-Work Folders, i-Work Place Joyina, Imisebenzi Yezitifiketi, Ukuphathwa Kwemalungelo Izinsizakalo (RMS), Services Services, futhi ngokungezelela ukuxhumanisa yakho on ukwethula imvelo nge amafu esekelwe, isibonelo, Windows Azure Active Directory. Njengengxenye enkulu yendawo yangemuva yokufunda, uzokwenza izandla-ezenzweni kwimvelo ye-lab.
Leli cwaningo kulindeleke ukuba kusetshenziswe abachwepheshe be-Information Technology (IT) ababenomsebenzi we-Active Directory Domain (AD DS) futhi bafuna inkambo yodwa eyodala ukudala ukufunda nokusebenzisa amandla okutholakala nokutholakala kolwazi ku-Windows Server 2012 ne-Windows Server 2012 R2. Lokhu kuzovame ukufaka:
Ukukhangisa abalawuli be-DS abanethemba lokwengeza ukudala amaphuzu ekuthuthukisweni okufinyeleleka kokuFinyelela nokuLwazi ngeWindows Server 2012 neWindows Server 2012 R2.
Uhlaka noma iziphathimandla zengqalasizinda ngolwazi jikelele lwe-AD DS nokwaziswa okuyi-lookig yokwandisa kulolo lwazi oluyisisekelo nokufundisa ngokubanzi ukuqhubekela phambili ekuthuthukisweni kwe-Active Directory ku-Windows Server 2012 ne-Windows Server 2012 R2.
I-IT Professionals ezithathe i-10967A: Izidingo ze-Windows Server Infrastructure course futhi zithemba ukwandisa kulolo lwazi lokubhalisa olusebenzayo.
Ukuqonda izixazululo ezifinyelelekayo zokuphathwa komlingiswa futhi ube namandla okubhekana nezimo ngezixazululo ezifanele.
Thumela futhi ulawule i-AD DS ku-Windows Server 2012.
I-AD evikelekile yokuthumela i-DS.
Yenza izindawo ze-AD DS, uhlele futhi uhlole ukuphindaphinda
Yenza futhi uphathe i-Group Policy
Hlola izilungiselelo zamakhasimende nge-Group Policy
Yenza amandla okufaka isitifiketi amandla (CA) yomyalo nge-AD CS nokuthi ungamela kanjani ama-CA.
Yenza, udlulise futhi uphathe izimemezelo.
Yenza futhi uphathe i-AD RMS.
Yenza futhi ulawule i-AD FS.
Ukwaziswa okuphephile nolungiselelwe ukufika ekusetshenzisweni kwentuthuko, isibonelo, i-Dynamic Access Control, AmaFold Work and Workplace Join
Isikrini, uphenye futhi usethe ukubambisana kwebhizinisi kwe-AD DS.
Qalisa kabusha i-Active Azure Active Directory.
Qinisekisa futhi ulawule i-Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS).
Izizinda ze-Office 365 zibuka izikwele zokwakha ze-Office 365 kanye nengxenye eqhubekayo ye-IT Professionals. I-Microsoft Office 365 inhlanganisela yokuphatha ifu nezinhlelo zokusebenza zamuva kakhulu. Lezi zifundo ziqala ngokuhlaziya ubunjiniyela be-Office 365 kusukela ohlelweni lwe-IT Professional, bese kuthatha ingqondo ngokudlulisa i-Office 365 bese iqedela ngokuthatha izinguquko ekusebenziseni nasekulawulweni.
I-Office 365 idlulisela amakhono amaklayenti acele ngenkathi evumela i-IT ukuthi ihlale ilawula. Yiba noma kunjalo, lolu shintsho ludinga i-IT Pros ukuthi ilungise amakhono abo wesiphakeli wamasiko wendabuko ngesikhathi sokwaziswa kwe-computer. Kulesi sithrekhi, i-IT Pros izobona ukuthi izingxenye ezintsha zifika kanjani ku-Office 365 ukuqala, thola mayelana namadivayisi amasha nezinqubo zokuthutha emithwalweni yomsebenzi kwi-Office 365, futhi uhlele ingxenye entsha yokusebenza ye-IT Pros.
Le Ofisi ye-Office 365 ibaluleke kakhulu ekufundiseni abaqeqeshi bezobuchwepheshe be-IT nezikhungo zesikhungo se-Office 365 ezinika amandla umnotho wezinga nokugcwalisa ikhono.
Lezi zici zenzalo ezithakazelisayo indlela yokuthumela e-Microsoft ye-Office 365. Ukudlulisa ukuphathwa kwefu akunjalo neze njengenhlangano evamile yamaseva yamakhasimende okwandisa futhi idinga amakhono amasha nezinqubo ezintsha. Ngehhovisi le-Office 365, amahhovisi e-IT angakhuphuka ngokushesha futhi agijime nomshayeli futhi aqhubekele esizukulwaneni ngelungiselelo elifanele lamakhono. Thola mayelana nenqubo yokuthumela, amadivayisi nemisebenzi esetshenziselwa ukuthuthukisa ukuqala kohlelo lwakho lwe-Office 365.
Le Ofisi ye-Office 365 iyinhloko yamaphuzu weseshini okuthakazelisayo okunye okunye nokucabangela ngenkathi ikhula imvelo yeHhovisi le-Office 365 ibe ilungiselelo lesizukulwane.
Lesi sigaba sigxile kwisigqi se-Office 365 Service Communications. Njengenzuzo enembile ye-mode, ukugcina iziteshi zokuxhumana phakathi kwabachwepheshe be-IT neqembu le-Office 365 kuyisisekelo. Bonisa indlela ukuhlelwa kwe-Office 365 yokulungisa, ukulungisa, ukusekela, ukuphatha kahle nokuhanjiswa kahle nokuxhumana nokuxhumana ne-Microsoft.
Le Hhovisi 365 ibalulekile umhlangano wokufundisa ubonisa indlela iMicrosoft ethatha ngayo ukuthuthukiswa nokuthi ungamela kanjani izinguquko eziphathweni ze-Office 365 nezicelo endaweni yakho.
Leli klasi lezinsuku ezinhlanu linikeza amandla ekufundeni kanye nemikhuba yokusungula nokuklama iMenenja yokuPhathwa kweSistimu ye-System Center 2012. Ngaphezu kwalokho leli klasi lizosetha ukuzithoba kokusebenzisana nengqalasizinda yabo ye-2012 Manager Manager.
Lolu hlelo luhlelwe ochwepheshe be-IT abane-Windows Server eyisisekelo, i-Active Directory kanye nesistimu yokusetha kanye nokuhlangana kokuphatha.
Ngemuva kokuqedela le nkambo, ukubhekana nezimo kuzoba namandla oku:
Yethula iMenenja Yokusebenza 2012 bese uhlela izilungiselelo ezithile zomhlaba wonke kanye ne-Management Server.
Sebenzisa Amachibi Amithombo Yokufinyeleleka Okuphezulu.
Hlola i-Console Manager Operations ne-Web Console.
Yenza kokubili ukusungulwa kwe-computer kanye ne-manual operator kuma-frameworks angaphezulu.
Ngenisa futhi ufeze amaphakethe wokuphatha.
Hlela Imithetho, Izenzakalo, Abaqaphi Nemisebenzi.
Hlela ukubika futhi wenze imibiko.
Iziteshi zokusebenza kwesikrini namaseva asebenzisa i-Agentless Monitoring ne-Agentless Exception Monitoring.
Hlela futhi uqondise amasevisi wokuqoqa ama-Audit.
Yenza ukusebenzisana okuhambisanayo.
Yenza Izicelo Zokusabalalisa.
Hlela iseva yesango ukuze uqaphele izimo ezingaphenduliwe.
Hlela izincwadi phakathi kokubambisana kokuphatha.
Hambisa kusuka kumphathi we-Operations 2007 kuya ku-2012 Operations Manager.
I-CEO ye-Apple uTim Cook ivuno $ 198 million ku-2016, Ingabe kuyiqiniso